ရောမလူမျိုးများသည် ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်စေခဲ့သည် - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > အသင်းတော် > ရောမအုတ်အုတ်ကျက်ကျက်စေသော
တမန်တော်ပေါလုသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀၀၀ ခန့်ကရောမမြို့ရှိချာ့ချ်သို့စာရေးခဲ့သည်။ စာသည်စာမျက်နှာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပြီးစာလုံးပေါင်း ၁၀၀၀၀ အောက်သာရှိသော်လည်း၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာကြီးမားသည်။ ခရစ်ယာန်ချာ့ချ်၏သမိုင်းတွင်အနည်းဆုံးသုံးကြိမ်တိုင်ဤချာ့ချ်သည်ချာ့ချ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
ဒါဟာ 1st ၏အစမှာဖြစ်ခဲ့သည်။5. ရာစုနှစ်တစ်ခုတွင် ဩဂတ်စတင်းလူသာအမည်ရှိ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးသည် အပြစ်မရှိသောဘဝဟု ခေါ်ဝေါ်သည့်အရာဖြင့် သူ၏စိတ်စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော် သူသည် ထုံးတမ်းဓလေ့အားလုံးကို လိုက်နာပြီး သူ၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမိန့်တော်များကို ပြဌာန်းထားသော်လည်း လူသာသည် ဘုရားသခင်နှင့် ကင်းကွာနေသည်ဟု ခံစားမိသေးသည်။ ထို့နောက် ရောမလူမျိုးများထံပေးသောစာကို လေ့လာနေသော တက္ကသိုလ်ကထိကတစ်ဦးအနေဖြင့် လူသာသည် ရောမဘာသာဖြင့် ပေါလု၏ကြေငြာချက်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ 1,17 အကြောင်းမူကား၊ ယုံကြည်ခြင်းမှ ဆင်းသက်လာသော ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ခိုင်ခံ့သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ဤတန်ခိုးကြီးသောကျမ်းပိုဒ်၏အမှန်တရားသည် လူသာ၏နှလုံးသားကို ထိမှန်သွားစေသည်။ သူရေးသားခဲ့သည်
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ဖြောင့်မတ်သောဘုရားသခင်၏လက်ဆောင်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ကြောင်း၊ ထိုကရုဏာရှင်ဘုရားသခင်သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတရားမျှတစေသည့် passive ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအားဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြောင်းထိုနေရာ၌ကျွန်ုပ်စတင်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟာလုံးဝပြန်လည်မွေးဖွားခံရပြီးပွင့်လင်းသောတံခါးများမှပရဒိသုအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ နောက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုမင်းသိတယ်ထင်တယ် လူသာသည်သန့်ရှင်းပြီးရိုးရှင်းသောgဝံဂေလိတရားကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နှုတ်ဆိတ်နေခြင်းမရှိပါ။ ရလဒ်မှာပရိုတက်စတင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။
၁၇၃၀ ခုနှစ်ခန့်တွင်ရောမတို့၏မငြိမ်မသက်မှုများကြောင့်အင်္ဂလန်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်ချာ့ချ်သည်ခက်ခဲသောအချိန်များကိုဖြတ်သန်းနေရသည်။ လန်ဒန်သည်အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လွယ်ကူသောနေထိုင်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ ချာ့ချ်များတွင်ပင်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသည်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောလူငယ်အင်္ဂလီကန်သင်းအုပ်ဆရာ John Wesley သည်နောင်တတရားကိုဟောပြောသော်လည်းသူ၏အားထုတ်မှုမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းသည်။ ထို့နောက်မုန်တိုင်းထန်သောအတ္တလန္တိတ်ရေကြောင်းခရီးတွင်ဂျာမန်ခရစ်ယာန်အုပ်စုတစ်စု၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတွေ့မြင်ပြီးနောက် ၀ စလီသည် Moravian Brothers ၏အစည်းအဝေးအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရသည်။ ၀ ယ်စလီကဤနည်းကိုဤသို့ဖော်ပြခဲ့သည် - ညနေခင်း၌, အလွန်တုံ့, ငါ Aldersgate လမ်းပေါ်မှာပါတီမှတစ်စုံတစ် ဦး ကလူသာ၏ရောမကိုဖို့နိဒါန်းဖတ်နေခဲ့သည်ပါတီသို့သွားကြ၏။ ခရစ်တော်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်နှလုံးသားထဲ၌အလုပ်လုပ်နေသည်ဟူသောပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကိုသူလေးပုံတစ်ပုံမှကိုးနှစ်အရွယ်တွင်ဖော်ပြနေစဉ်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားသည်ထူးဆန်းစွာနွေးထွေးနေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ခြင်းကိုခရစ်တော်ခရစ်တော်တစ်ပါးတည်းအားယုံကြည်သည်ဟုခံစားမိသည်။ ထို့အပြင်သူသည်ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များနှင့်ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များကိုဖယ်ရှားပြီးအပြစ်နှင့်သေခြင်းတရား၏တရားမှငါ့ကိုကယ်နုတ်ပြီဟုအာမခံချက်ရခဲ့သည်။
တစ်ဖန်၊ ရောမလူမျိုးများသည် ဧဝံဂေလိတရားပြန်လည်နိုးထမှုကို အစပြုစဉ်တွင် အသင်းတော်အား ယုံကြည်ခြင်းသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် အဓိကကျသောအချက်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက နောက်ထပ် မငြိမ်မသက်မှုများသည် ၁၉၁၆ ခုနှစ်တွင် ဥရောပသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ သွေးထွက်သံယိုများကြားတွင်၊ 1. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း၊ ဆွဇ်လူမျိုးသင်းအုပ်ဆရာငယ်တစ်ဦးသည် ခရစ်ယာန်ကမ္ဘာတစ်ခု၏ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ပြီးပြည့်စုံမှုဆီသို့ ချဉ်းကပ်လာသည့် သူ၏အကောင်းမြင်၊ လစ်ဘရယ်အမြင်များကို အနောက်တိုင်းမျက်နှာစာတွင် ရှုံ့ချဖွယ်သားသတ်ရုံကြောင့် တုန်လှုပ်သွားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆိုးရွားသော အကျပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် ဧဝံဂေလိ သတင်းစကားသည် လက်တွေ့ဆန်သော အမြင်သစ်တစ်ခု လိုအပ်ကြောင်း Karl Barth အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ 1918 ခုနှစ်တွင် ဂျာမနီတွင်ထွက်ရှိခဲ့သော ရောမများထံပေးစာနှင့်ပတ်သက်သည့် ၎င်း၏မှတ်ချက်တွင် ပေါလ်၏မူလအသံသည် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ပညာသင်ဆုနှင့် ဝေဖန်မှုများအောက်တွင် နစ်မြုပ်သွားမည်ကို Barth က စိုးရိမ်ခဲ့သည်။
ရောမ ၁ နှင့်ပတ်သက်သောသူ၏မှတ်ချက်များတွင်ဘာတကပြောကြားသည်မှာ the ၀ ံဂေလိတရားသည်အခြားအရာများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း၊ အရာခပ်သိမ်း၏ဇာစ်မြစ်ဖြစ်သောအမြဲတမ်းအသစ်သောစကားလုံးတစ်လုံး၊ ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်ကြောင်းနှင့်လိုအပ်သောဘုရားသခင်ထံမှသတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် မှန်ကန်စွာဖတ်သည့်အခါ၎င်းသည်၎င်းယူဆထားသည့်ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ arth ၀ ံဂေလိတရားကပါဝင်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်သည်ဟု Barth ကပြောသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ပွဲကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်အားလျော့စေသောကမ္ဘာနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်း Barth ကပြသခဲ့သည်။ ဤတွင် ထပ်မံ၍ ရောမများသည်တောက်ပနေသောမျှော်လင့်ချက်အမှောင်ထုထဲမှထွက်လာသည့်တောက်ပကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည်။ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များနှင့်ဓမ္မပညာရှင်များ၏ကစားကွင်းတွင်ဗုံးတစ်လုံးကျဆင်းခြင်းကိုရောမများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာ့၏မှတ်ချက်ကိုသင့်လျော်စွာဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်းသည်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသောစာဖတ်သူကိုဆွဲဆောင်သောရောမတို့၏သတင်းစကားကတစ်ဖန်ပြန်လည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဒီသတင်းစကားကလူသာကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ သူမသည် Wesley အသွင်ပြောင်း။ ဒါဟာ Barth ကိုအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ယနေ့လူများစွာပြောင်းလဲနေဆဲပင်။ သူတို့မှတစ်ဆင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူ၏စာဖတ်သူများကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်သေချာစွာပြောင်းလဲစေသည်။ သင်တို့သည်ဤသေချာစွာမသိလျှင်ရောမဘာသာကိုဖတ်။ ယုံကြည်ရန်ငါတိုက်တွန်းသည်။